Waxbarashada nabadda riixay sida looga hortago xagjirnimada (Filibiin) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Waxbarashada nabada oo loo riixay sida looga hortago xagjirnimada (Filibiin)
August 8, 2017 Warbixinnada Waxqabadka 0
(Waxaa daabacay: Minda News. July 30, 2017)
CAGAYAN DE ORO CITY (MindaNews / 30 July) - Marka laga soo celiyo soo celinta tas-hiilaadka iyo kaabayaasha dhaqaale ee ku lumay go'doominta Marawi, bare ka tirsan Maranao ayaa kula dardaarmay saraakiisha waxbarashada dalka in dadaalka dib u dhiska ay ka dhigaan fursad dib loogu soo celiyo manhajka waxbarashada.
Dr. Nagasura T. Madale, oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga dhaqanka, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xoojiyo waxbarashada nabada oo laga bilaabo dhalinyarada si looga hortago, mustaqbalka fog, kororka xagjirnimada rabshadaha leh gaar ahaan aagagga dalka ee u nugul inay ku soo xadgudbaan dowladda Islaamiga ah. -xiriiriyeyaal xagjir ah.
"Hay'adaha waxbarashadu waa inay baraan fikradda nabada iyo rabshadaha oo ah xulasho kale oo lagu xaliyo khilaafaadka," ayuu carabka ku adkeeyay Madale, oo ah borofisar ka howlgabay Jaamacadda Mindanao State University.
"Hay'adaha waxbarashadu waa inay baraan fikradda nabada iyo rabshadaha oo ah xulasho kale oo lagu xaliyo khilaafaadka."
Wuxuu tusaale u soo qaatay in go'doominta Marawi awgeed, loo baahan yahay "in la maareeyo xiriirka ka dhexeeya iyo ka dhexeeyo Maranaos, Maranaos iyo non-Maranaos, iyo Maranaos iyo bulshada guud."
Waxaa lagu wareystay Sabtidii isagoo ka qeyb galaya Shirka Caalamiga ah ee dib u dhiska colaada Marawi halkan, Madaale wuxuu sharaxay in dadaalka loogu jiro kobcinta isfaham dhaqameedka ka dhexeeya dadka kala duwan ee Mindanao iyo dalka intiisa kale “waa in la xoojiyaa si loo kordhiyo bulshadeena awoodda wadajirka ah ee wax looga qabanayo ifafaalaha xagjirnimada iyo xagjirnimada. ”
Soo jeedinta Madale waxay la mid tahay dareenka Bishops-Ulama Conference (BUC), oo ah xarun muhiim u ah wadahadalka Mindanao, iyo Xoghayaha Difaaca Delfin Lorenzana, oo ah askari howl gab ah.
Hadal ay dhowaan soo saareen, BUC iyo wada-hawlgalayaasheeda wadahadalka waxay ku yiraahdeen "waxbarashadda nabadda waa mid ka hortag u ah xag-jirnimada rabshadaha wata."
"Dib u dhiska Marawi waxaa loola jeedaa dib u soo celinta xiriirkii xumaa ee ka dhexeeyay dadyowga iyo hay'adaha muhiimka ah si loo kobciyo wadahadalka diimaha dhexdooda ah, iyo is fahamka dhaqamada," ayaa lagu yiri bayaanka.
"Anaga ahaan, dib u dhiska Marawi waxay ku saabsan tahay kobcinta bulsho soo dhaweyneysa bulshada, dhaqanka, siyaasada iyo diimaha kala geddisan and (iyo) bulsho qaran oo xushmeysa himilooyinka dadyow kala duwan," ayaa lagu yiri bayaanka.
"Waxaan aaminsanahay baahida loo qabo in dib loo dhiso xiriirka," Lorenzana ayaa ku yiri khudbadiisa muhiimka ah.
Keenida xaalad caadi ah
Fariin loo aqriyay iyada, Xoghayaha Waxbarashada Leonor Magtolis Briones ayaa u sheegtay ka qeyb galayaasha shirka in "in ka badan kaliya dayactirka iyo dib u dhiska fasalada," caqabada hortaala Waaxda Waxbarashada (DepEd) waa "sida aan ugu soo celin karno nolosheena caadiga ardaydeena. ”
“Waxbarashadu waa inay sii socotaa (maadaama) waxbarashadu aysan sugi karin,” Briones ayaa tiri.
Briones ayaa intaas ku dartay in hay'addu ay haatan ku jirto diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dib loogu furayo casharro ku yaal magaalada Marawi ee dagaalladu aafeeyeen "markii hore la siiyay."
Waxay kalsooni ku qabtaa barnaamijka 'Adopt-A-School' ee hay'adda 'Marapto', oo ay ardaydu "awood u leeyihiin inay fasalka la yimaadaan buugaag, qalin iyo warqad, iyo in ka badan saqaf madaxooda ka sarreeya."
Ku xigeenka xoghayaha DepEd Resvee Escobido ayaa sheegay in dagaalada oo sii socda awgood, ilaa 14 iskuul ay soo gaareen waxyeelo soo gaartay, dhamaantoodna ay gaarayaan ilaa 203 fasal.
Wadarta qarashka ku baxa dib u dhiska kaabayaashaan iyo soo celinta tas-hiilaadkeeda la xiriira ayaa lagu qiyaasay inay tahay P2.3 bilyan, ayuu raaciyay Escobido.
Taageerada guriga ee dib u dhiska
Cagayan de Oro Rep. Maximo Rodriguez wuxuu u xaqiijiyey ka qaybgalayaasha shirka, oo inta badan ka yimid bulshada bulshada ee Maranao, in hoggaanka aqalka ay ka go'an tahay inay taageeraan baahiyaha dib u dhiska Marawi.
Rodriguez wuxuu shaaca ka qaaday in qayb ka mid ah shuruudaha maaliyadeed ee dadaalka ay ku jiri doonaan miisaaniyad dheeri ah oo lagu soo dhejinayo Golaha.
Marka laga reebo Rodriguez, qaar kale oo hadda ka mid ah kooxda loogu yeero Mindanao ee aqalka ayaa ka soo qeyb galay shirka: Bukidnon Rep. Malou Acosta-Alba, Iligan City Rep. Frederick Siao, iyo ku xigeenka afhayeenka aqalka Ferdinand Hernandez oo laga soo doorto South Cotabato.
Rodriguez wuxuu sheegay in kooxda Mindanao ay hubin doonto in lacagaha dib u dhiska lagu heli karo iyadoo loo marayo ficillada sharci dejinta ee loo baahan yahay.
Lorenzana waxay sheegtay in dadaalka dib u dhiska uu noqon karo "mid gaabis ah oo dhib badan" waxaana laga yaabaa inuu u baahdo in ka badan P20 billion oo ah miisaaniyada uu sameeyay Madaxweyne Duterte, ilaa iyo hada.
U aqoonsashada dhalinyarada inay yihiin nabad-dhisayaal awood leh
U wac Codsiyada 2018/2019 Georg Arnhold Booqashada Machadka Cilmi-baarista ee Waxbarashada ee Nabadda Waarta
Guusha daraasadaha nabada ee colaada kadib waxay kuxirantahay macalimiinta waxbarida
Waxaa laga yaabaa 31, 2017 Research 1
Sanadihii la soo dhaafay, waxay noqotay wax caado ka ah waddamada colaadaha ka dib in lagu soo bandhigo manhajka dugsiga waxbarasho nabadeed ama koorsooyin xuquuqda aadanaha ah. Nasiib darrose macallimiinta xaaladaha isku dhaca ka dib waxaa laga yaabaa inay qaadaan nabaro qoto dheer oo xagga maskaxda ah iyo cuqdad. Ilaa la siiyo taageerada lagama maarmaanka u ah inay wax ka qabtaan arrimahan uma badna inay wax ku ool noqon doonaan hirgelinta koorso waxbarasho oo nabadeed. [sii wad akhriska…]
Carruurtu sida dhisayaasha nabadda (Filibiin)
September 3, 2018 Warar & Muuqaal, Dhalinta diirada la saaray 0
Istaraatiijiyado waxbarasho nabadeed oo casri ah sida muusikada, farshaxanka, ciyaaraha, isboortiga, sheekooyinka, iyo adeegga, waa aaladaha ay adeegsadaan Dhaqdhaqaaqa Nabadda ee 'Peace Teach Peace' si ay uga dhigto dhismaha nabada mid carruurta soo jiita. [sii wad akhriska…]
Wayward iyo Fanciful: Mashruuca Waxbarashada Nabada iyo Taariikhda ee Mindanao-Sulu (Filibiin)
April 27, 2017 Warar & Muuqaal, Siyaasadda 0
Xeerka Jamhuuriyadda Lambar 10908 wuxuu amrayaa is-dhexgalka taariikhda Filibiin-Muslimka iyo Dadka Asaliga ah, dhaqanka iyo aqoonsiga daraasadda Taariikhda Filibiin ee Tacliinta Aasaasiga ah iyo Sare. Sharcigu wuxuu aqoonsan yahay ujeeddada kama dambaysta ah ee abuuritaanka taariikh loo dhan yahay oo xisaabaad u leh dhammaan dadka reer Filibiin. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ilo dhaqaale oo ku saabsan taariikhda Bangsamoro iyo Lumad, farshaxanka, suugaanta, iyo luqadda. The Mindanao-Sulu Taariikhda iyo Mashruuca Waxbarashada Nabadda wuxuu doonayaa inuu ka jawaabo baahidaas. [sii wad akhriska…]